ओलीको बोलीले एमालेमा तरंग, आजको बैठकमा तेस्रो धारले आपत्ति जनाउने | Ratopati
माधव नेपालको साथ छाडेका १० नेतामाथि ओलीको पेलान
हामीले आन्तरिक अनेकता होइन एकतामा जोड दिनुपर्छ । हिजो कता के भयो ? यो १० बुँदे । केके जाति एकतारे बजाएर भजमन गोविन्दम् गरिरहन आवश्यक छैन । १० बुँदे १० बुँदे, १० बुँदे, १० बुँदे ....। यो पनि धेरै रेटिरहन आवश्यक छैन । मिलेर, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं न खुरुक्क ! अब कति बजाउने १० बुँदे ट्याङट्याङ ...? माधव आउँछन् कि भनेर १० बुँदे गरेको । अब के १० बुँदे, १० बुँदे ?
तेस्रो धारका नेताहरूप्रति ओलीको अर्को टिप्पणी यस्तो थियो–
तर्क गर्दा, छलफल गर्दा असल तरिका हुनुपर्छ । एक अर्कालाई होच्याउने, अपमान गर्ने, टिप्पणी गर्दा मतभेद बढाउने खालका क्रियाकलाप र तौरतरिका हामीले गर्नुहुँदैन । हाम्रा तौरतरिका एकदमै मिलनसार साथीहरूका बीचमा । सत्रुसँग लड्न नसक्ने, आफ्ना विचारमा चाहिँ लडेर बस्ने माधव नेपालको जस्तो ? विरोधीका पाउ मोल्ने, म्याउम्याउ गर्ने, दिनैपिच्छे बूढानीलकण्ठ र केजाति । अहिले त बालुवाटारतिर सर्या छ । म्याउँ म्याउँ गर्न दिनैपिच्छे पुग्ने, निवेदन हाल्न पुग्ने, अनि पार्टीका विरुद्धचाहिँ... । आफ्ना विरुद्ध, साथीहरूका विरुद्ध... ।
ओलीको नेतृत्व एमालेका लागि मात्र नभई देशकै लागि आवश्यक : रघुवीर महासेठ